ဘယ်ဂျီလ်ယံမြေမှ နယ်သာလန်ခြင်္သေ့တို့ရဲ့ ဟိန်းဟောက်သံများ..... - YTV Channel
Home | Sports | ဘယ်ဂျီလ်ယံမြေမှ နယ်သာလန်ခြင်္သေ့တို့ရဲ့ ဟိန်းဟောက်သံများ…..
ဘယ်ဂျီလ်ယံမြေမှ နယ်သာလန်ခြင်္သေ့တို့ရဲ့ ဟိန်းဟောက်သံများ…..
နေးရှင်းလိဂ်ရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုတော့ ယမန်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ နယ်သာလန်သားတွေကသက်သေပြသွားခဲ့ပါတယ်... နေးရှင်းလိဂ်ရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ဘယ်ဂျီလ်ယံနဲ့ နယ်သာလန်ပွဲစဥ်ကို ဘယ်ဂျီလ်ယံနိုင်ငံ ဘရူဆယ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်... ဒီပွဲမှာ ပြိုင်ဖက်နှစ်သင်းလုံးဟာ နာမည်ကြီးကစားသမားများနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး အကြိတ်အနယ်ယှဥ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်... ပထမပိုင်းပြီးဆုံးဖို့ငါးမိနစ်အလိုမှာ နယ်သာလန်ဖက်မှတောင်ပံကစားသမားလေးဘက်ဂျဝန်က ၁၈ ကိုက်စည်းကနေ လှပတဲ့ကန်ချက်နဲ့ နယ်သာလန်အသင်းအတွက် အဖွင့်ဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်.....
ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာလည်း သူတပြန်ကိုယ်တပြန်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ ဂိုးပေါက်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရှိနေခဲ့ပေမယ့် ပွဲချိန် ၅၁ မိနစ်မှာတော့ ဒီပိုင်းက တစ်ကိုယ်တော်ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်ကာ ဒုတိယမြောက်ဂိုးကိုသွင်းယူပြီး နယ်သာလန်အသင်းကိုတောက်ပစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်... နောက်ထပ်ပွဲချိန်မိနစ် ၆၀ ကျော်မှာတော့ နယ်သာလန်ဖက်မှတတိယမြောက်ဂိုးကို ဒမ်ဖရိုင်းစ်ကထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပြီး ၆၅ မိနစ်အရောက်မှာတော့ အနိုင်သေချာစေတဲ့စတုတ္ထမြောက်ဂိုးကို ဒီပိုင်းကပဲထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်... ဘယ်ဂျီယံအသင်းဖက်မှ အကောင်းမွန်ဆုံံးတန်ပြန်တိုက်စစ်တွေဆင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲချိန် ၇၇ မိနစ်မှာ ကက်စတာညီ သွင်းယူလိုက်တဲ့ဂိုးက လူကျွန်နေခဲ့တာကြောင့် ခြေပဂိုးနစ်နာခဲ့ရကာ ပွဲချိန် မိနစ် ၉၀ ပြည့်လို့ နာကျင်အချိန်ပိုရောက်မှ အိမ်ရှင်အသင်းအနေနဲ့တစ်ဂိုးသာသွင်းနိုင်ပြီး ဘယ်ဂျီလ်ယံမြေမှာဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်.....
နယ်သာလန်အသင်းဟာ အဆိုပါနိုင်ပွဲကြောင့် အုပ်စုအဆင့်တွင်ထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်နေပြီး ဘယ်ဂျီလ်ယံမြေမှာလိမ္မော်ရောင်ခြင်္သေ့တွေဟိန်းဟောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်.....
လာမယ့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ ဘယ်ဂျီယံအသင်းဟာ ပိုလန်အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ရော ဘယ်အသင်းတွေက အနိုင်နဲ့ဦးဆောင်မလဲ...? အမှတ်တွေပဲဆုံးရှုံးမလား...? ဆိုတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့ခန့်မှန်းချက်လေးတွေကို ဖွင့်ဟပြောပြပေးခဲ့ပါဦးနော်......